အာဟာရေ ပဋိကူလ သညာ – ဝင်းမေတ္တာ
အာဟာရေ ပဋိကူလ သညာ
July 16, 2021 July 16, 2021 / တရားဓမ္မ
စားသောက်မျိုသွင်းအပ်သော ခဲဖွယ်ဘောဇဉ်စသည့် အာဟာရတို့၌ စက်ဆုပ်ဖွယ်ဟုထင်မြင်လာအောင်အောက်မေ့ဆင်ခြင် ရှုမှတ်တတ်သော သညာကို “အာဟာရေ ပဋိကူလသညာ”ဟု ခေါ်၏။
အာဟာရေ ပဋိကူလ သညာ (၁)ပါး
အာဟာရေ = အစာအဟာရ၌
ပဋိကူလ = စက်ဆုပ်ရွှံရှာဖွယ်
သညာ = မှတ်သားခြင်း။
စားသောက်မျိုသွင်အပ်သော ခဲဖွယ်ဘောဇဉ်စသည့်အစာအဟာရ တို့တွင် စက်ဆုပ်ဖွယ်ဟု ထင်မြင်လာအောင် အောင့်မေ့ဆင်ခြင် ရှူ့မှတ်သော သညာကိုခေါ်သည်။ အဟာရကူလသညာသည် အာရမ္မဏိကတရားပင်ဖြစ်သည်။ ထိုသညာ၏ ကမ္မဋ္ဌာန်းအာရုံသည်ကား စားသောက်ဖွယ် အစာအဟာရပင်ဖြစ်သည်။
အစာအာဟာရ သည် ခန္ဓာကိုယ်အား မပျက်မစီးကြီးပွားခိုင်ခံ့အောင် ရွက်ဆောင် ထောက်ပံ့ထားသကဲ့သို့ ထို့အတူ မိမိဆိုင်ရာ အကျိုးကို လွန်စွာဖြစ်စေနိုင်, ရွက်ဆောင်ပေးနိုင်သောတရားကို “အာဟာရ“ဟုခေါ်၏။
၁။ ကဗဠီကာရာဟာရ သြဇာရုပ်။
ဩဇာနှင့်တကွ ရုပ်၈-ပါးအစု ဖြစ်သောအာဟာရဇ အဋ္ဌကလာပ်ကိုဆောင်၏။
၂။ ဖဿာဟာရ စိတ်အားလုံး၌ ယှဉ်သော ဖဿစေတသိက်။
၃။ မနောသဉ္စေတနာဟာရ စိတ်အားလုံးတို့၌ ယှဉ်သော စေတနာ။
ပဋိသန္ဓေဝိညာဏ်ဟူသော အကျိုးကိုဆောင်၏။ (သင်္ခါရပစ္စယာ ဝိညာဏ်ကို ထောက်။ သင်္ခါရ = စေတနာကံ)
၄။ ဝိညာဏာဟာရ စိတ်အားလုံး။
အတူဖြစ်ဖက် စေတသိက်နာမ် နှင့် ရုပ်တရားကိုဆောင်၏။ (ဝိညာဏပစ္စယာ နာမရူပံကို ထောက်ပါ။)
အာဟာရေ ပဋိကူလ ဘာဝနာ
မွန်မွန်မြတ်မြတ် စားသောက်လတ် ရှုမှတ်ဘာဝနာ။
ပါးစပ်တစ်ပေါက် စားကာသောက် ကိုးပေါက်ယိုစီးတာ။
နှစ်နှစ်သက်သက် စားသောက်လျှက် အထွက်ရွံစရာ။
စားတော့ဝိုင်းကာ ထုတ်သည့်ခါ ကွယ်ရာပုန်းလိုသာ။
တစ်ညတာမျှ သိုလှောင်ကြ ပုပ်ရအကုန်သာ။
ပဋိကူလ အာဟာရ ပွားကြဘာဝနာ။
အာဟာရေ ပဋိကူလသညာ ဆင်ခြင်ပုံ ၁၀ မျိုး
(ဆွမ်းစားခြင်း, ယာဂုသောက်ခြင်း စသည်တို့၌ စက်ဆုပ် ရွံရှာဖွယ်အဖြစ် ဆင်ခြင်ပုံ ၁၀ မျိုး)
၂။ အိမ်စဉ် လှည့်ကာ ရှာဖွေရခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း၊
၃။ သုံးဆောင် စားသောက်ရခြင်းအားဖြင့် လည်းကောင်း၊
၄။ သလိပ်, သည်းခြေ, သွေး, ပြည် ဟူသော အာသယ ၄ ပါးအားဖြင့် လည်းကောင်း၊
၅။ စုဝေးတည်နေရာ အစာသစ်အိမ်အားဖြင့်လည်းကောင်း၊
၆။ မကျေကျက် သေးသောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊
၈။ ဆံပင်, မွေးညင်း စသော အကျိုးရင်းအားဖြင့် လည်းကောင်း၊
၉။ ယိုစီး စိမ့်ထွက်သော အကျိုးဆက် အားဖြင့် လည်းကောင်း၊
၁၀။ အလုံးစုံ အကုန်အစင် လူးလဲခြင်းအားဖြင့်လည်းကောင်း။
Ven Indacarya Mawgyun
အာဟာရေ ပဋိကူလသညာ ကမ္မဋ္ဌာန်းလင်္ကာ
(၁) ဆွမ်းခံသွားရခြင်း ဂမနအားဖြင့် ဆင်ခြင်ပုံ။
မဟာနုဘော်၊ ရဟန်းတော်တို့၊ ရွှင်ပျော်နေ့လုံး၊ ကျင့်သုံးဓမ္မ၊ စောစောထ၍၊ စေတီယင်္ဂန၊ စသည်ဝတ်ဝတ်၊ မချွတ်ပြုကာ၊ ချိန်ခါလင့်ထ၊အာသန၌၊ ၀ီသတိံ သာ၊ ၀ါယာပတ်လုံး၊ ပိုက်ကျုံးစီးဖြန်း၊ သင်္ကန်းသပိတ်၊ ပရိက္ခရာ၊ ယူဆောင်ကာလျင်၊ သာယာပြန့်ပြူး၊ ဆန်းထူးစိမ့်စုံ၊ ရဂုံမြိုင်ဝ၊ ၀ိဝေကကို၊ အာဟာရတွက်၊ မငဲ့ကွက်ဘဲ၊ စားမက်ရှာရေး၊ သုဿာန်ပြေးသည့်၊ တောခွေးအလား၊ ရွာသို့သွားသော်၊ စဉ်အားရောက်အောင်၊ ကွင်းမရှောင်ရ၊ အိမ်မြှောင်ကြွက်ချေး၊ လင်းနို့ချေးနှင့်၊ ခိုချေးရှဉ့်ချေး၊ လူချေးရွံ့ဗွက်၊ ချောက်နက်သစ်ငုတ်၊ အကောင်ပုပ်ပြွမ်း၊ ဆွမ်းခံလမ်းသို့၊ ကြိုးပမ်းချီရ၊ တံခါးဝက၊ များလှဘေးဘျမ်း၊ ခွေးကြမ်းနွားဆိုး၊ ဆင်မြင်းဆိုးကြောင့်၊ ငုံ့လျိုးမျက်နှာ၊ မနေသာခဲ့၊ မျှော်ကာကြည့်ရ၊ ပြန်ကာလလည်း၊ ဧသနယော၊ အာဟာရောသည်။ ။ အဟောစက်ဆုပ်ဘွယ်ပါတကား …………..
(၂) ရှာမှီးရခြင်း – ပရိယေသနအားဖြင့်ဆင်ခြင်ပုံ။
အိုးတိုလက်စွဲ၊ ဘုန်းစားနဲသို့၊ ရှင်မွဲရောင်ခြောက်၊ အိမ်စဉ်လျောက်၍၊ ညှိုးအောက်မျက်နှာ၊ ခွာရာရွံ့ဗွက်၊ တင်ရောက်တက်သား၊ တစ်ဘက်ဖြင့်ကြွ၊ တစ်ဘက်မတည်း၊ ကာလနွေပူ၊ လေဆောင်ယူသည့်၊ ဖုံမြုမျက်မှိုက်၊ ကိုယ်၌ရစ်ဝိုင်း၊ အိမ်ဝတိုင်း၌၊ ယင်ရိုင်းသဲသဲ၊ ငါးမဲပုပ်စပ်၊ ချွဲနှပ်တံတွေး၊ လူ့သေးခွေးဘင်၊ နွားမစင်အား၊ စသည်များစွာ၊ ရွံဖွယ်ရာကို၊ မှိတ်ကာချဉ်းကပ်၊ မှိုင်ကာရပ်လည်း၊ ပုပ်စပ်ကျန်ကြွင်း၊ ထမင်းမုန့်ဟောင်း၊ ကောင်းမကောင်းကို၊ မကောင်းတစ်ချို့၊ လောင်းတစ်ချို့နှင့်၊ တစ်ချို့ကဆဲ၊ ဦးပြည်းရဟန်း၊ ဖိုချောင်ခန်းမှာ၊ ကျီးကန်းသဘော၊ ဖွေရှာမောသည်။ ။ အဟောစက်ဆုပ်ဘွယ်ပါတကား ……………
စားမည်စိတ်ရှိ၊ လက်နှိုက်မိမူ၊ မြတ်ဘိသူကို၊ ဖိတ်လှူမတင့်၊ ပူရှိန်သင့်၍၊ ချွေးနှင့်စိုရွှဲ၊ လက်ဆုပ်ထဲမှ၊ ချေခွဲတစ်တန်၊ အာသို့နှံသော်၊ ညှီနံ့တံတွေး၊ ကြေးညစ်မြှေးကို၊ လုံးထွေးပေါင်းစု၊ ထောင်းထုဝါးလျင်း၊ ခွေးစားကျင်းမှာ၊ ထည့်ခွေးစာသို့၊ ရှုရာမလှ၊ မမြင်ရလို့၊ မြိန်ကြနိုင်ပါ(၃)၊ မျိုသောခါလည်း၊ ၀င်ကာဆင်းလျောက်၊ စာအိမ်ပေါက်သို့၊ မရောက်ခင်သေး၊ ပြည်သွေး+သည်းခြေ၊ သလိပ်တွေဟု၊ လေးထွေအာသယ၊ ရောထဆင်ကွဲ(၄)၊ မွေးကတည်းက၊ အနည်းငယ်မျှ၊ မဆေးရဘူး၊ လဲလူးရွံဖွယ်၊ အိမ်ဝယ်တည်မော၊ အာဟာရောသည်။ ။ အဟောစက်ဆုပ်ဘွယ်ပါတကား…………….
(၆+၇+၈) အစာမကြေခြင်းအားဖြင့် ဆင်ခြင်ပုံ။
(က) ရွာဒွန်းစဏ္ဍား၊ တံခါးအထွက်၊ တံစိပွက်သို့၊ စက်ဆုပ်ဖွယ်ရာ၊ မိုက်မဲစွာသား၊ အစာအိမ်ထဲ၊ ဟိုလဲဤနေ့၊ စားသရွေ့ကို၊ ပေါင်းပွေ့စုလျက်၊ ဓါတ်မီးချက်၍၊ ပရပွက်အူ၊ ကြိုက်ကြိုက်ဆူပွ၊ အမြှုပ်ထလျက်၊
(ခ) အူခေါင်းသက်၍၊ ချက်မြစ်ကျောက်ကုန်း၊ အူအဆုံးဟု၊ ပိတုန်းပိတ်ဝယ်၊ ကျင်ငယ်+ကျင်ကြီး၊ ဖြစ်ထပြီးလေ၊
(ဂ) ကောင်းစွာကြေက၊ ကေသာ+လောမ၊ စသည်ရောရှု၊ အပုပ်စုကို၊ ပြီးမှုစေပါ၊ မကြေခါမူ၊ နူနာစိုရွှဲ၊ ပွေးဝဲအစ၊ ရာမကသည့်၊ ဖလရောဂါ၊ ဖြစ်စေသောကြောင့်။ ။ အဟောစက်ဆုပ်ဘွယ်ပါတကား ……………
၀မ်းမြောက်ရွှင်ပြယ်၊ လူပုံလယ်မှာ၊ တင့်တယ်ဘိခြင်း၊ တစ်ခံတွင်းက၊ သွင်းသည့်အစာ၊ တညဉ့်ကြာလျှင်၊ မျက်နှာညိုးမှိတ်၊ နှာခေါင်းပိတ်လျက်၊ လူဆိတ်ကွယ်ရာ၊ စွန့်ရရှာသည်၊ ကြည့်ရာတောင်မြောက်၊ ကိုးပေါက်ဒွါရ၊ အစာဝမှ၊ ယိုကျဖျင်းဖျင်း၊ ဆံမွေးတွင်းက၊ သက်ဆင်းကျလျော၊ အာဟာရောသည်။ ။ အဟောစက်ဆုပ်ဘွယ်ပါတကား ……………..
(၁၀) ပေကျံခြင်း သမ္မက္ခနအားဖြင့်ဆင်ခြင်ပုံ။
စားသောအခါ၊ ခံတွင်းမှာတည့်၊ ရွံရာမသိ၊ ထွက်ပြန်ဘိလည်း၊ တံစိပွက်တွင်း၊ ချက်ထမင်းမှ၊ အမြှုပ်ထ၍၊ ၀ါဋနှုတ်ခမ်း၊ အိုးနှုတ်ခမ်းမှာ၊ လူးလည်းပါသို့၊ ကိုးဒါွရပေါက်၊ ဆံမွေးပေါက်မှ၊ စီးလျောက်ယိုကျ၊ ခေဌမျက်မှေး၊ နှပ်ချေးနဖါ၊ သွားမှာသွားမြှေး၊ ညစ်ကြေးမစင်၊ ကျင်ငယ်ဘင်တို့၊ ၀န်းကျင်လိ်မ်းကပ်၊ ရေသုံးသပ်လည်း၊ ကြပ်ကြပ်မပျယ်၊ ထွီဘွယ်သဘော၊ အာဟာရောသည်။ ။ အဟောစက်ဆုပ်ဘွယ်တကား ……………….
Ven. Dhammapala (ဖားအောက် တောရ)
ဗုဒ္ဓအဘိဓမ္မာ အနှစ်ချုပ် – ဒေါက်တာ မင်းတင်မွန်Download